Semalt विशेषज्ञ: उच्च-गुणवत्ता सामग्री मामला!
Semalt विशेषज्ञ: उच्च-गुणवत्ता सामग्री मामले!
के तपाई कहिल्यै मोटेलमा जानुभएको छ, र तपाईले छोड्नु पर्‍यो किनभने यस्तो देखिन्थ्यो कि यो दोस्रो सेकेन्डमा ढल्दैछ? तपाईंको सामग्रीको गुणस्तर तपाईंको आगन्तुकहरूमा कत्ति प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यो किनभने तपाईंले भाँडामा लिने गुणवत्ता राम्रो भएको महसुस गर्नुभएन वा किन तपाईंलाई अर्को मोटल थाहा थियो जुन राम्रो थियो। यो उही तरीकाले क्वालिटीले वेबसाइटहरूलाई असर गर्छ।
"> Semalt। हामी विश्वास गर्दछौं जुन उत्तम छ; तपाईसँग उत्तम हुनु पर्छ। यसैले हाम्रो वेबसाइट अरूहरूको माझमा खडा छ, हाम्रो टीम सबै भन्दा राम्रो हो, र हामी सबैलाई राम्रो अनुभव प्रदान गर्दछौं। यो एक कारण हो किन तपाईं हाम्रो वेबसाइट पढ्नुहुन्छ। तपाईं हाम्रो साइट वरिपरि एक टुर लिन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंलाई आश्वासन दिन्छौं कि तपाईं आउनु भएको हरेक सामग्री तपाईंलाई वाह गर्न गइरहेको छ।
अब, यही हो जुन हामी तपाईंको वेबसाइटलाई प्रस्ताव गर्छौं। जब हामी सक्दछौं, तपाईं पूर्ण वेबसाइट र आफ्नो प्रतिस्पर्धामा जाँदै गरेका सम्पूर्ण क्लिकहरूको साथ तपाईंको वेबसाइटमा जानुहुनेछ, स्वचालित रूपमा तपाईंको हुन सुरू गर्नुहोस्। क्वालिटी सामग्रीका लागि सबै धन्यवाद।
हाम्रो उच्च-गुणवत्ता स्वादले पनि हाम्रो वेबसाइटलाई यस अद्भुत बनाउँदैन; यसले तपाइँको वेबसाइटलाई केवल राम्रोको रूपमा पनि बनाउँदछ र, यदि सम्भव छ भने पनि अझ राम्रो। यसैले हामी जोड दिन्छौं कि तपाइँले हामीलाई तपाइँको वेबसाइटहरू भारी लिफ्टि do गर्न सक्नुहुन्छ।
आज, धेरै मार्केटरहरू र वेबसाइट विकासकर्ताहरू सचेत छन् कि एसईओ र सामग्री मार्केटिंग वास्तवमा आपसमा सम्बन्धित छ। । जब तपाइँ यसलाई बुझ्नुहुन्छ, तपाइँले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू देख्न सुरू गर्नुहुन्छ जहाँ तपाइँको वेबसाइटले एकदम नयाँ बन्नको लागि पूर्ण नयाँ मार्ग लिन सक्दछ।
स्पष्ट कुरा भन्ने हो भने, यो असम्भव छ गुणस्तरीय वेब सामग्री बिना प्रभावी एसईओ अनुकूलन छ। स्थान प्राप्त गर्न, तपाइँलाई तपाइँको एसईओ को लागी खोजी ईन्जिन को पहिलो पृष्ठहरु मा राख्न को लागी; त्यसो भएपछि, तपाईलाई उच्च गुणवत्ताको सामग्री चाहिन्छ तपाईका पाठकहरूलाई तपाइँको वेबसाइट मार्फत जान वा लामो समयसम्म रहनको लागि। यी सबै आवश्यक कारकहरू खोज ईन्जिनहरू हुन् जुन गुगलले वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्दा विचार गर्दछ।
SEO मार्फत काम गर्दा, सामग्री किंग हो! <
मार्च २०१ 2016 मा, Google रेकर्डमा गए, " सब भन्दा महत्वपूर्ण खोज रैंकिंग कारक गुणस्तर सामग्री, ब्याकलिंक प्रोफाइल र मेशिन शिक्षा हो। " यो तपाइँले तपाइँको वेबसाइट मा Semalt काम गर्न कति चाहिन्छ भनेर देखाउँदछ। निस्सन्देह तपाईंले धेरै गर्नुभयो, र तपाईंको विचार र अभिप्राय अझै पूरा हुनेछ, तर यो अधिकार प्राप्त गर्न र शीर्ष १० मा स्थान प्राप्त गर्न, तपाईंलाई हामीलाई चाहिन्छ। र हामीलाई तपाईं चाहानुहुन्छ।
गुणवत्ता सामग्री के हो?
यसलाई परिभाषित गर्दा हामी गुगलले गुणस्तरीय सामग्रीलाई के विचार गर्छौं भनेर हेर्नेछौं। जे भए पनि, ती आज अग्रणी खोज इञ्जिन हुन्, त्यसैले हामी उनीहरूको दाहिने तर्फ हुन चाहन्छौं। गुगलले recent मार्च २०१ 2017 मा यसको भर्खरको अपडेटको साथ सामग्री गुणस्तर दिशानिर्देश प्रकाशित गरेको छ। यसले उच्च सामग्रीको विकास गर्ने प्रयास गर्दा वेब सामग्री लेखकहरू, वेब विकासकर्ताहरू, र वेबसाइट मालिकहरूले कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भनेर वर्णन गर्दछ।
रमाईलो तथ्य यो हो कि गुगलले आफ्नो खोज इञ्जिन एल्गोरिथ्मलाई एक बर्षमा सयौं पटक परिमार्जन गर्दछ, तर यसले अझै पृष्ठ खोजी गर्दा मानव खोज गुणस्तर रेटरहरू प्रयोग गर्दछ।
के तपाई Google गुणवत्ता सामग्री दिशानिर्देशहरु को माध्यम बाट जाने को सोच रहे हैं? खैर, त्यो आवश्यक छैन। सर्वप्रथम यो यो हो किनभने यो तपाईको शरीरमा भरिने चीजहरूले भरिएको छ, र यदि तपाईले कुनै ज्ञान एक वेबसाइटमा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईलाई कुनै दिक्क लाग्दैन। दोस्रो, तपाईंको हामीसँग छ। Semalt ले यसको सम्पूर्ण अस्तित्व यी दिशानिर्देशहरू मार्फत खर्च गरेको छ र यसलाई हाम्रो काम गर्ने तरीकामा समाहित गरेको छ। हामीलाई काममा लिई, तपाईं आफैंलाई यो कार्य बचत गर्नुहोस्, र तपाईं आफ्नो ऊर्जा विकासको अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आफ्नो ऊर्जा केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ।
गुणस्तरीय सामग्री परिभाषित गर्न चप्पल झुकाव हुन सक्छ। । केहिलाई यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न तपाईंको सामग्रीको क्षमताको रूपमा वर्गीकरण गर्दछ, र अन्यले तपाईंको सामग्रीलाई शीर्ष गुणको रूपमा परिभाषित गर्दछ जब यसले तपाईंको पाठकहरूलाई मद्दत गर्दछ। गुगलले क्वालिफाइ गर्ने क्वालिटी सामग्री प्रयोग गरेको यो सुरागहरू हो।
शीर्ष गुणको रूपमा वर्गीकरण सामग्रीमा, गुगलले यो कुरा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ कि वेबसाइट को मद्दत गर्ने उद्देश्य राखेको हो। र कसले सामग्री सिर्जना गर्नुभयो। यस लेखलाई गाईडको रूपमा लिनुहोस्। पहिलो अनुच्छेदबाट, यो स्पष्ट थियो कि यो सामग्री वेबसाइट मालिकहरूको लागि हो जुन गुणस्तरीय सामग्री मार्फत उनीहरूको र ranking्कि know कसरी सुधार गर्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ। साथै, तपाईंलाई थाहा छ यो वेबसाइट Semalt द्वारा स्वामित्वमा छ।
यी दुई कारकहरू खराबबाट राम्रो सामग्री स indicate्केत गर्न पर्याप्त छन्।
तिनीहरूलाई तपाइँको वेबसाइटमा राख्नुको प्राथमिक उद्देश्य यही हो। तपाइँ तपाइँका पाठकहरू सूचना वा सेवाहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाइँले प्रत्येक पृष्ठमा पाउनुहुनेछ। यस तरिकाले, तपाइँको पाठक तपाइँको सामग्री संग सन्तुष्ट छन्। अन्तमा, कुनै पनि सामग्रीलाई शीर्ष गुणस्तरको रूपमा परिभाषित गर्न, पाठकहरूले यसलाई शीर्ष गुणवत्ताको रूपमा हेर्नुपर्दछ।
के तपाईंको पृष्ठले तपाईंको पाठकहरूलाई उनीहरूको समस्याहरू समाधान गर्न वा तिनीहरूको प्रश्नहरूको उत्तर दिन मद्दत गर्दछ? यदि यसले यो गर्न सक्दछ भने, यो उच्च मार्गको रूपमा वर्गीकृत गर्न सही मार्गमा छ।
तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा गुणस्तर पाउँदा अत्यन्तै खुसी हुन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, तपाईलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका वेब पृष्ठहरू छन्। नतिजाको रूपमा, के यी यी प्रत्येक वेबसाइटहरूमा शीर्ष गुणस्तर फरक हुन्छ। यो अर्को कारण यो हो किन यो राम्रो छ तपाइँको लागि यो गर्न Semalt प्राप्त गर्न। कहिलेकाँही यो तपाइँको पैसा वा तपाइँको पृष्ठको कुरा हो। सस्तो Semalt द्वारा प्रदान गरिएको प्याकेजहरू संग, यो तपाइँको केक खाने उत्तम तरिका हो तर अझै पनि यो छ।
< h3> यहाँ क्वालिटी सामग्री भएको केहि फाइदाहरू छन्
गुणवत्ता सामग्री उच्च CTR उत्पन्न।
के तपाईं CTR को अर्थ के हो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग यहाँ लेखको अर्थ के हो भनेर व्याख्या गर्न समर्पित छ। यद्यपि त्यहाँ संक्षिप्त विवरण छ; हामी यो सिक्ने श्रृंखला तोड्न सक्दैनौं। CTR भनेको क्लिक-थ्रू दरहरूको लागि हो। यसले विज्ञापन, स्निपेट्स, वा ल्यान्डि pages पृष्ठहरू देखे पछि तपाईंको लिंकमा क्लिक गर्ने व्यक्तिहरूको स to्केत गर्दछ।
तपाईंको CTR एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव खोजी ईन्जिन हो जसमा प्रयोग गरिएको हो। तपाइँको गुणवत्ता स्कोर निर्धारण गर्न। तपाइँको CTR र SEO प्रयोग तपाइँको वेबसाइट को रैंकिंग निर्धारण गर्दछ।
यसको मतलब राम्रो CTR मतलब तपाइँको वेबसाइट (अधिक यातायात) मा अधिक क्लिकहरू, जुन हरेकको प्राथमिक उद्देश्य हो। वेबसाइट। थप क्लिकहरूले खोज ईन्जिनमा तपाईंको स्तर निर्धारण गर्दछ।
यदि तपाईंको सामग्री राम्रोसँग निर्माण गरिएको छैन भने यो सम्भव हुने छैन। यसले तपाइँको एसईओ को उपयोग, तपाइँको साइट को माध्यम बाट वेब क्रॉलर को क्षमता, र, अन्ततः तपाइँको पाठकहरु संग कुराकानी गर्ने क्षमता लाई असर गर्छ।
गुणस्तर सामग्रीले तपाईंलाई ब्याकलिks्क उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ
ब्याकलिंक्सको फाइदाका बारे विस्तृत रूपमा पढ्न < यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो एसईओ रणनीतिहरू मध्ये धेरै तपाईंसँग सक्दो उच्च-गुणवत्ता ब्याकलि you्कहरू छन्। ब्याकलिks्कले एक वेबसाइट र अर्को बीचको लिंकलाई जनाउँछ। यी प्रायः वेबसाइटहरूले यसको पाठकहरूलाई अर्को वेबसाइटमा पुनःनिर्देशित गर्न प्रयोग गर्दछन्, सामान्यतया जहाँ जानकारी प्राप्त भएको थियो। यसलाई इन्टरनेट सन्दर्भको रूपमा सोच्नुहोस्।
उच्च गुणवत्ता वेबसाइटहरूमा गुणस्तर ब्याकलिks्क राख्नु तपाईंको वेबसाइटमा अधिक ट्राफिक पाउने उत्तम तरिका हो। गुगलका लागि उच्च अधिकार वेबसाइटहरूमा उच्च गुणवत्ताको ब्याकलिink्क तपाईंको वेबसाइटमा विश्वासको स .्केत हो। हाई स्कूलमा, हाम्रा कक्षाका केहि साथीहरू थिए जसले हाम्रो असाइनमेन्ट फारमको उत्तरहरू प्रतिलिपि गरे। यो किनभने हामीले उनीहरूका उत्तरहरूमा भरोसा राख्यौं। उस्तै तरीकाले जुन अन्य वेबसाइटहरूले तपाइँको वेबसाइटलाई ब्याकलिंक गर्दछ किनभने तिनीहरू तपाइँले प्रस्ताव गरेको सामग्रीमा विश्वास गर्दछन्।
यो ट्रस्टले गुगललाई तपाईंको वेबसाइट महान् छ भनेर महसुस गराउन महत्वपूर्ण छ। गुणस्तरीय सामग्री को लागी सबै धन्यवाद।
गुणवत्ता सामग्रीले कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्न सजिलो बनाउँदछ।
कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्न गाह्रो हुन सक्छ; जब तपाइँ लेख्न वा डिजाइन गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाइँले बुझ्नुहुन्छ कि एक कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्न को लागी, सम्पूर्ण वाक्य प्रभावित हुन्छ। तर गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्नाले कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ कि तपाइँको पाठकलाई अर्थ लाग्छ। यो तपाइँलाई एक बलियो फूटिंग दिन्छ जब तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धा को साथ प्रमुख मा जानुहोस्।
ग्रेटर प्रयोगकर्ता अनुभव
गुणस्तर सामग्री भनेको तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको वेबसाइट प्रयोग गर्न बढी सजिलो पाउँदछ। गुणस्तर सामग्रीको अर्थ राम्रो संरचना र अधिक प्रासंगिक सामग्री हो। यी सबै तपाइँको वेबसाइट अझ राम्रो बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। गुणस्तरीय सामग्रीको साथ, तपाई व्याकरणको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन, तपाईका रोबोट txt फाईलहरू वा तपाईको मेटा-वर्णन। पाठकहरु तपाइँको वेबसाइट अधिक आकर्षक र विश्वास गर्न को लागी अधिक सहज लाग्नेछ।
आगन्तुकहरूले प्रत्येक एकल वाक्य पढ्नुपर्दैन यदि उनीहरूले चाहँदैनन् किनकि हरेक पृष्ठमा ठीक लेबल गरिएका पृष्ठहरू र उपशीर्षकहरूको कारण। यसले तपाईंको वेबसाइटलाई अधिक पहुँचयोग्य बनाउँदछ, जसले समय र अधिक ट्राफिकमा रहन अनुवाद गर्दछ।
Semalt बुझ्दछन् कि तपाइँको आगन्तुकहरु विशेष महसुस गर्न चाहान्छन्, उत्तम तरिकाले व्यवहार गर्न सकिन्छ, र उनीहरूलाई champs जस्तो महसुस गर्न सुनिश्चित गर्ने एउटा तरिका हो गुणवत्ता सामग्री प्रदान गरेर। तिनीहरूको समयको लागि योग्य।
तिनीहरूलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्नुहोस् र तिनीहरू फिर्ता आउन जारी राख्नेछन्।
मुख्यतया, गुणवत्ता एसईओ र गुणवत्ता सामग्री हातमा काम गर्दछ। पेशेवरको रूपमा, Semalt बुझ्दछ कि दुबै तत्वहरू आवश्यक छन् र एक अर्कोमा निर्भर छन्। त्यसोभए यदि तपाइँ तपाइँको समग्र वेब रैंकिंग सुधार गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले दुबै भागहरू सँगै बलियो बनाउनु पर्छ। यदि तपाइँ Semalt यो गर्न सक्नुहुनेछ, तपाइँको वेबसाइट खोज पृष्ठहरूमा पहिलो बन्ने बाटोमा छ।